Alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshad - Soosaarayaasha Alaabada Shiinaha - Qeybta 2
Hemo fiber helodialyzer (H ...
Dhiig-baxa hemodialysis-ka ...
Qiyaasta saxda ah ee faleebada faleebada u adkaysta
Badeecadani waxaa badanaa loo isticmaalaa faleebada daaweynta ee daawooyinka u nugul hoos u dhaca sawir-qaadista kiimikada iyo dawooyinka ka hortagga burooyinka. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay faleebada bukaan-socodka ee cirbadeynta paclitaxel, cirbadda cisplatin, cirbadeynta aminophylline iyo cirbadda sodium nitroprusside.
Nalalka faleebada nalka u adkaysta
Faleebo loo dejiyey isticmaalka hal (DEHP bilaash ah)
"Qalabka bilaashka ah ee DEHP"
Dejinta faleebada aan lahayn DEHP waxaa adeegsada dad aad u tiro badan waxayna gabi ahaanba beddeli kartaa xirmada faleebada dhaqameed. Dhallaanka hadda dhashay, carruurta, dhalinyarada, haweenka uurka leh, haweenka nuujinaya, waayeelka iyo bukaanka itaalka daran iyo bukaannada u baahan faleebada muddada-dheer waxay si ammaan ah ugu isticmaali karaan.
Dejinta faleebada filterka saxda ah
Dayaca wasakhda wasakhaysan ee faleebada ayaa laga hortagi karaa.
Daraasadaha caafimaadka ayaa cadeeyay in qayb weyn oo ka mid ah waxyeelada caafimaad ee ay sababaan faleebada la galiyay ay sababtay walxo aan la milmi karin. Nidaamka daaweynta, qaybo badan oo ka yar 15 μm ayaa badanaa la soo saaraa, kuwaas oo aan la arki karin isha qaawan oo dadku si fudud u diidaan.
TPE dejinta faleebada saxda ah ee saxda ah
Qaab dhismeedka xuubku wuxuu joojiyaa dareeraha faleebada otomaatiga ah wuxuu isku daraa dareeraha joogsiga otomaatiga iyo shaqooyinka kala sifeynta xalka caafimaadka. Dareeraha waa la joojin karaa si xasilan xitaa haddii booska jirku si xad dhaaf ah loo beddelo ama faleebada si lama filaan ah kor loogu qaado. Hawlgalku wuxuu waafaqsan yahay, oo xitaa ka fudud yahay kan noocyada faleebada caadiga ah. Qaab dhismeedka xuubku wuxuu joojiyaa faleebada dareeraha waa mid tartan badan oo leh rajo suuq wanaagsan.
Otomaatigga Jooji dareeraha saxanka faleebada saxda ah (oo aan lahayn DEHP)
Auto stop dareeraha set faleebo sax ah
Cirbadda jirka ku shaqeysa
Cirbadda cirbadeynta hypodermic ee la tuuri karo waxay ka kooban tahay cirbadaha irbad, tuubbo irbad iyo shaati difaac ah. Waxyaabaha la isticmaalay waxay la kulmaan shuruudaha caafimaadka waxaana nadiifiya maadada 'ethylene oxide'. Badeecadani waa mid kacsan oo xor ka ah sheybaarka. ku habboon intradermal, subcutaneous, muruqa, duritaanka xididka, ama soo saarida daawada dareeraha ah si loo isticmaalo.
Tilmaamaha Model: Laga soo bilaabo 0.45mm ilaa 1.2 mm
Cirbadda aan cirbada lahayn ee sambabaha wadata
Qiyaasta cirbadeynta waxaa lagu hagaajiyaa dunta saxda ah, qaladka qiyaasta ayaa ka fiican kan irbadaha joogtada ah.
Nidaamka duritaanka aan loo baahnayn
Cirbad aan xanuun lahayn si loo yareeyo cadaadiska nafsaaniga ah ee bukaanka;
Technology Teknolojiyad faafida subcutaneous si loo hagaajiyo heerka nuugista daroogada;
Injection Cirbad irbad la'aan ah si looga fogaado dhaawacyada usha irbada ee shaqaalaha caafimaadka;
Ilaalinta deegaanka oo xalliso dhibaatada dib-u-warshadaynta qashinka caafimaad ee aaladaha duritaanka dhaqameed.
Cirbadaha lagu shubo daroogada la tuuri karo waa alaabooyin si weyn looga isticmaalo gudaha iyo dibedda. Shaqada caafimaad ee dhabta ah, shaqaalaha caafimaadku waxay u baahan yihiin inay isticmaalaan qaar ka mid ah siriingado waaweyn iyo cirbado badan oo cirbadeyn ah si ay u sii daayaan dareeraha dawada. Waxyaabaha dareeraha ah ee la tuuro ee ay soo saarto shirkadeena irbadaha Caafimaadka si ballaaran ayaa loogu adeegsaday kiliinikada, faa'iidooyinka bulshada iyo dhaqaalahana waa kuwo muhiim ah. Sirinji-kala-dirida daroogada ayaa looga baahan yahay inuusan sun lahayn oo nadiif ahayn, sidaa darteed waa la soo saaray oo lagu duubay aqoon isweydaarsi heerkiisu yahay 100,000. Badeecadu waxay ka kooban tahay siriinj, irbad cirbad daroogo ah, iyo dabool difaac ah. Jaakada saliingaha iyo usha xudunta waxay ka sameysan yihiin polypropylene, piston-ka waxaa laga sameeyay caag dabiici ah. Badeecadani waxay ku habboon tahay bamgareynta iyo isku durida daawada dareeraha ah marka ay milanayso daawada. Kuma haboona cirbadeynta bini'aadamka, subcutaneous iyo intramuscular.
Sirinjiyada insulin-ta waxaa loo qaybiyaa awooda magaca ee awooda magaca: 0.5mL, 1mL. Cirbadaha cirbadaha ee cirbadaha insulin ayaa laga heli karaa 30G, 29G.
Cirbadda insulin-ta waxay ku saleysan tahay mabda 'kinetic, iyadoo la adeegsanayo faragelinta saxda ah ee usha asaasiga ah iyo gacmo-gacmeedka dibedda (oo leh bistooladda), iyadoo la nuugaayo iyo / ama riixitaanka xoog laga soo saaray ficil-gacmeedka, loogu talagalay himilada caafimaad ee daawada dareeraha ah iyo / ama cirbad daawada dareeraha ah, badanaa loogu talagalay cirbadeynta bukaan-socodka (bukaanka subcutaneous, xididka xididka, cirbadaha muruqyada), caafimaadka iyo ka hortagga cudurrada faafa, tallaalka, iwm.
Cirbadda insuliinta waa shey nadiif ah oo loogu talagalay hal adeeg oo keliya waana nadiif la'aan shan sano. Cirbadda insulin-ta iyo bukaankuba waa wada-xiriir, oo waqtiga isticmaalku waa 60 daqiiqo gudahood, taas oo ah xiriir ku meelgaar ah
<< <Hore 12345 Xiga> >> Bogga 2/5